Maka: html imeyile | Martech Zone
Maka: html imeyile
NgoLwesibini, Februwari 2, 2021 NgeCawa, ngoMatshi 21, 2021 Douglas Karr
Imowudi emnyama yaqaliswa kwiminyaka embalwa edlulileyo kwaye ukwamkelwa kuyaqhubeka nokukhula. Imowudi emnyama ngoku iyafumaneka kwi-macOS, i-iOS, kunye ne-Android kunye nokusingathwa kweapps kubandakanya iMicrosoft Outlook, iSafari, iReddit, iTwitter, iYouTube, iGmail kunye neReddit. Akusoloko kuhlala kukho inkxaso epheleleyo kuyo nganye, nangona. Imowudi emnyama iyanciphisa ukusetyenziswa kwamandla kwescreen kwaye inyuse ukugxila. Abanye abasebenzisi bakwatsho ukuba baziva bencitshisiwe kuxinzelelo lwamehlo, kodwa oko kuye kwabuzwa. Kutshanje, thina
IMicrosoft ikhupha i-Outlook 2007 FAQ kwakhona: Inkxaso ye-HTML
NgoLwesihlanu, Februwari 16, 2007 NgeCawa, Oktobha 19, 2014 Douglas Karr
IMicrosoft Office Outlook 2007 yokuNika iMifanekiso i-FAQ? 2/15/07 Imvelaphi Kwiinguqulelo ezidlulileyo, i-Outlook isebenzise iinjini ezimbini zokuhambisa? I-Internet Explorer yokufunda umxholo, kunye neMicrosoft Word yokuhlela xa ubhala imiyalezo. Oko kwakuthetha ukuba yayikukuba ubuphendula okanye ugqithisa ii-imeyile ze-HTML, iinguqulelo zangaphambili ze-Outlook ziya kuqala zisebenzise i-IE's enjini yokuyijonga, kuya kufuneka utshintshele kwinjini yokubhala (iLizwi). Sikufundile oku